Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese Ismaila Sarr Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Ismaila Sarr agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye ya, umuaka ya, nzuru ya na ndu ya.
Na nkenke, gosipụta akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara na Senegal. Lifebogger malitere site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ ahịhịa iji nweta ebe ngosi ihe ngosi - nchịkọta zuru oke nke Ismaila Sarr's Bio.
Ndụ mbido na ịrị elu nke Ismaila Sarr.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nwetara ọsọ, aghụghọ ma nwee ike ịme nnukwu ebumnuche - ihe dị mkpa maka FIFA zuru oke. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụ egwu Ismaila Sarr's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Ismaila Sarr Nwatakiri Akụkọ nke:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Isma.”Ismaïla Sarr mụrụ na 25th ụbọchị nke February 1998 na nne ya, Marieme Ba na nna, Abdoulaye Sarr Naar Gaad n’obodo ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ obodo Saint Louis, Senegal.
Obodo amụrụ Ismaila Sarr, Saint Louis (atọrọ hiwere na 1659) ka a na-ewere dị ka otu n’ime obodo mgbe ochie obodo mgbe ọdịda anyanwụ Africa, mgbe ụfọdụ akpọrọ isi ụlọ ọrụ France nke West Africa. N'okpuru ebe a bụ nlele obodo ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Ismaila Sarr sitere na ezinụlọ ya.
Mata Ismaila Sarr Family- Saint-Louis, Senegal. Ebe E Si Nweta Foto: Wikipedia
Ismaila Sarr Early Afọ: Onye na-agba ọsọ ọsọ ọsọ sitere na ezinụlọ Africa sitere na oge mbụ nke afọ ya na Saint Louis. O toro n'akụkụ nwanne ya nwoke nke nne na nna mụrụ mụrụ bụ; Papis, Kiné, Ndèye Ami na Badara.
Ismaila Sarr sitere na nzụlite ụlọ nke ụlọ elu dị elu nke nna ya nke bụbu onye na-agba bọọlụ. Ị maara?… Nna Ismaila Sarr, Abdoulaye Sarr Naar Gaad bụbu onye mba Senegalese na-egwuri egwu maka mba ọdịda anyanwụ Afrịka n'ime oge 80s. Eziokwu a site na itinye aka pụtara na football na-agba n'ezinụlọ ya ekele nna ya.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ruo ihe karịrị afọ 20 ka ezumike nká site na football, ọ dị mfe maka Abdoulaye Sarr Naar Gaad ịkwaga na ọrụ ndị ọzọ ma mesoo ezumike nká. Nna nke ukwu n'agbanyeghị na-ata ahịhịa bọọlụ dịgidere na-elele nke ahụ ụmụ ya agaghị emebi agụmakwụkwọ ha maka football. Na mbido, o debara aha ya na ụmụ ya gụnyere Ismaila Sarr na Umarlọ akwụkwọ Oumar Syr Diagne emi odude ke St Louis, Senegal.
Sadio Mane Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Redkpọasị maka Schoollọ Akwụkwọ: Ismaila Sarr kpọrọ ụlọ akwụkwọ asị, obi adịghị ya mma na mkpebi nne na nna ya zigara ya n'ụlọ akwụkwọ. N'ezie, ịgụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ abụghị nke ya na ọtụtụ ndị maara ya na agbata obi ya, ịga ụlọ akwụkwọ pụtara dị ka ihe nkịtị. N'ọtụtụ oge, ọ ga-agba akwụkwọ iji gaa soro ndị enyi ya gbaa bọọlụ.
Ndị nne na nna Ismaila Sarr natara ọtụtụ akụkọ ọjọọ sitere n'aka ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ ya ma mgbe ha hụrụ omume a n'onwe ha, ha kpebiri ime ihe banyere nwa ha nwoke. Ha mere ka ọ kwụsị ịga akwụkwọ ma were ya kpụga ya nna ukwu ịkwa akwa agbata obi ya ka o wee mụta ịkwa akwa (ọrụ ma ọ bụ ahia nke ịkwa akwa).
Dị ka ezigbo onye ọ bụla na-amụ ọrụ, Ismaila Sarr wedara onwe ya ala wee mụta usoro nke ịkwa akwa, nke o ji ịdị uchu rụọ. Agbanyeghị, nke ya Akọnuche football enweghị ike ikwe ka ọ gaa n’ihu ijere nna ya ukwu ozi. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, obi ya chọrọ football. Na njedebe, nwata nwoke nwere obi ike soro obi ya ka ọ hapụrụ ịkwa akwa ma were ike gaa n'ihu na-enwe agụụ ya na mbido, na-enweghị nnabata ya.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite
Ismaila Sarr kwesiri ka ọ gụchaa afọ nke ise ya na Oumar Syr Diagne School tupu ọ hapụ ihe kpatara ya wee debanye aha ya na AS Génération Foot. Mgbe nnwale mechara mee nke ọma, nwa okorobịa ahụ etinyere aha ya maka klaasị ịgba bọl.
Ismaila Sarr Card Identity na AS Génération .kwụ. Ebe E Si Nweta: Alchetron
Ismaila Sarr bidoro na otu Academy dị ka Sadio Mane. Ọ matara ntọala nke ọrụ ahụ AS Génération Foot ka ọ na-eme kwa ụbọchị dị ka ohere iji mee ihe kachasị mma n'ọrụ m. O nyere aka klọb ahụ site na ọkwa nke abụọ ruo na elu nke Njikọ Senegalese. Nnukwu mmasị ya na ịnụ ọkụ n'obi ya maka egwuregwu football hụrụ ya ka ọ rọrọ nrọ ịbanye Europe.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ụzọ Ebube
Dịka ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ, ndị nwere ọsịsọ na-apụ apụ na mba igwu egwu na Europe, ebe a na-agakarị ya na-abụkarị ndị France-France. Afọ 2016 hụrụ Ismaila na-ahapụ ezinụlọ ya wee banye nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na FC Metz.
Ekwesiri m ime mgbanwe na gburugburu ebe obibi adịghị mfe maka nwata nwoke Ismaila bụ onye na-ahapụbeghị obodo ya wee kpọọ ala ọzọ. N'ihi mkpa ọ dị ịmasị, Sarr tara ahụhụ site na mmerụ ahụ ugboro ugboro, n'ihi oke itinye aka na ubi nke na-abụkarị ihe kpatara ya. Imerụ ahụ ugboro ugboro mere ka ezinụlọ ya na-atụ egwu maka ọrụ ya. Ọ dị njọ na nna Sarr ga-etinye aka. Dị ka ndị ịgba ọsọ;
“Ọbụna papa m na-akpọkarị m, na-etiku m ka m gbanwee otú m si egwu egwuregwu, iji zere imerụ ahụ́ mgbe mgbe. Ma enweghị m ike inyere ya aka. Anọgidere m na-alụ ọgụ ma na-emegide ndị na-emegide m ruo mgbe m bịara sikwuo ike ma na-eguzogide mmerụ ahụ́ ”
Ọganihu Ismaila Sarr na FC Metz hụrụ ka ndị otu mba ya kpọrọ ya- nrọ ga-emezu maka ya. Calledkpọ ndị otu ya ka ọ kpọọ ya bụ ihe egwu kachasị na ndụ ya.
Ị maara?… Ismaila Sarr gaara aga Spain ma sonye na nnukwu Barcelona. Onye na-agba bọọlụ ahụ na-ekwe nkwa jụrụ Barcelona na-ekwu na ọ gbabeghị maka ọrụ ya. Nke ahụ ọ dị mma ka ndị Spen nke Spanish kpọọ ya?. Vidio dị n'okpuru ebe a na-akọwa ihe kpatara ya jiri kpọọ FC Barcelona kpọọ ya. Hụ ụfọdụ n'ime ihe mgbaru ọsọ ya.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Bilie na-ewu ewu
Ismaila Sarr leghaara ezigbo Barcelona anya isonyere Rennes ruo ebe ọ gara n'ihu na nnukwu akara mgbaru ọsọ ya (ụfọdụ n'ime ihe mgbaru ọsọ ya) dị ka a hụrụ na vidiyo dị n'elu. Ihe osise a hụrụ ka etinyere aha ya na ndị otu egwuregwu nke FIFA World Cup 2018.
Mgbe ọ nọ na Rennes, Ismaila Sarr malitere ile vidiyo nke Sadio Mane - mmezi ya, dribbling ya na ebumnuche ya. Na 13 Disemba 2018, ihe mgbaru ọsọ Sarr nyeere Rennes aka ịchọta ebe ha nọ na 2018-19 UEFA Europa League knockout phase. N'ịbụ onye a kwụghachiri na UEFA Europa League Goal of the Season (2018 - 19) hụrụ ka klọb na-achụ maka mbinye aka ya.
Na 8 August 2019, Sarr sonyeere klọb Premier League, Watford, na ego mbufe-mbufe. Kemgbe ọ bịara na Premier League, e nweela enweela mmekọrịta dị omimi maka ndị egwuregwu FIFA na ndị Watford Fans ndị masịrị ya na ọsọ Ismaila Sarr na aghụghọ ya.
N'oge a na-ede, oge Sarr na-eyi uwe elu Watford anọwo na egwuregwu megide United ebe o meriri volley ma kpatara ntaramahụhụ nke nyeere ndị otu ya aka merie United 2-0.
Obi abụọ adịghị ya, Ismaila Sarr egosila ụwa niile na ya bụ nkwa ndị ọzọ mara mma nke ọgbọ Senegalese ya Sadio Mane. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na ịrị elu nke Premier League, o doro anya na ụfọdụ ndị egwuregwu ga-abụrịrị na-atụgharị uche na Ismaila Sarr nwere enyi nwanyị ma ọ bụ na ọ lụọla n'ezie.
Eziokwu bụ, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọdịdị ya mara mma, ihu mara mma, ịmụmụ ọnụ ọchị na ihe ịga nke ọma ya dịka ndị na-agba ọsọ agaghị etinye ya na ndepụta nke ndị enyi nwanyị na nwunye. Agbanyeghị, n'azụ ndị egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma nke ghọrọ nwunye nwere obi ụtọ nke Ismaila Sarr. N’okpuru bụ foto nke Ismaila Sarr na nwunye ya onye dika DBBzz Aha Fat Sy.
Zute Ismaila Sarr nwunye.
Ismaila Sarr mere mkpebi ịlụ di na nwata - tupu o mee ya ka ọ bụrụ ọkachamara. N'ikwu okwu banyere nkwado ọ na-enweta n’aka nwunye ya, Ismaila kwuru otu oge na N'ajụjụ ọnụ DakarBuzz;
“Fat Sy kwadoro m nke ukwuu, ogologo oge tupu m mee ya dị ka onye ọkpụkpọ egwuregwu. Ọ nyere nnukwu onyinye na atụmatụ ọrụ m n'ihi na ọ bụ ya na-achịkwa nri m, oge ọzụzụ m na ezumike m. Achọrọ m ịlụ di na nwunye n'oge, iji kwụsie ike n'ihi na ọnwụnwa dị ukwuu nye onye na-egwu bọl. "
Vidio dị n'okpuru ebe a na-achịkọta ịhụnanya miri emi Ismaila Sarr nwere maka nwunye ya Fat Sy. Mkpakọrịta bụ n’ezie otu n’ime isi ihe kpatara o jiri lụọ di na nwata.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ nke Onye
Mata ụdị ndụ Ismaila Sarr si na football ga - enyere gị aka ịmata ụdị onye ọ bụ.
Tomata Ismaila Sarr Ndụ Nkeonwe
Na-amalite, anyị na-amalite site na mkpebi ya imezi n'oge. Ismaila Sarr bụ onye kwenyere na onye ọ bụla na-eto eto nke na-achọ ịlụ nwere ike ịgbalị ịbanye n'ọrụ kwesịrị ịgbalị ịlụ n'oge. Nke a dị mkpa iji zere ọnwụnwa nke inwe ndị nwere ihe ga-emebi ọrụ ha.
Nke abuo, obu onye n’eji uzo ndu na ndu. Ejirighị Sarr na-amanye ihe, ikwere na ihe ziri ezi ga-abịa n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ na-enwekarị mmasị ịrụ ọrụ n'ike aka ya.
N'ikpeazụ, na ndụ onwe ya, Ismaila Sarr n'oge edere ekweghị na 'Ogbugbu Akara'bụ ihe ama ama na egwuregwu bọọlụ taa. Ọ na-egosipụta okpukpe ya na ụlọ alakụba ya ma na-edebe ịhụnanya ezinụlọ ya n'obi ma ọ bụghị n'ahụ ya na egbugbu.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ezinụlọ
N'agbanyeghị nsogbu mbụ ahụ, ndị nne na nna Ismaila Sarr nwere obi ụtọ ịhapụ nwa ha nwoke ka o soro agụụ ya nke akwụlarị ụgwọ. Icingrụ ọrụ ịkwa akwa ka nyeere ya aka n'ọrụ ya. Dị ka Sarr si kwuo;
Agbanyeghị na m hapụrụ ọrụ ịkwa akwa, m nọ na-ahụ maka nna m ukwu ịkwa akwa ma taa, ọ bụrụla ezinụlọ m na-ese ejiji. ”
Tupu ọ gaa France, Ismaila reụrụ iyi iji mee ka ha bụrụ ndị mụrụ ya mpako karịsịa maka àjà ndị ha chụrụ maka ya. O siiri nna ya, Abdoulaye Sarr Naar Gaad aka ịla ezumike nká na football. Taa, obi dị ya ụtọ na ọ dịghachi ndụ.
Banyere ụmụnne nwanne Ismaila Sarr: Dabere na Ismaila Sarr toro n'akụkụ nwanne ya anọ. O nwere nwanne nwoke nke na-akpọ Papis Sarr nke na-eme dịka onye ndụmọdụ ọrụ ya yana nwanne nwanyị aha ya bụ Kiné, onye dịka nne nke abụọ nye ya. Nwanne ya nke ọzọ aha ya bụ Ndèye Ami, nke ọdụdụ bụ Badara.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - si ebi ndụ
Mgbe emechara nyocha banyere ndụ Ismaila Sarr, anyị ghọtara na ọ bụ naanị onye dị mfe jidere ya mkpa bara uru nke anaghị efu oke ego. N'okpuru ebe a bụ onye egwuregwu ya na onye obodo ya bụ Cheikhou Kouyaté amachaghịkwa banyere ndị nwere ụgbọ ala n'azụ ha.
Mara ụzọ ndụ Ismaila Sarr.
Ikpebi n'etiti ịdị mma na ihe ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka Ismaila Sarr. N’oge a na-ede akwụkwọ, a hụbeghị Sarr na-enwe ọmarịcha ụgbọala, nnukwu ụlọ nke ndị na-agba ụkwụ na-ebi ndụ na-adị mfe ịhụ ụzọ.
Ismaila Sarr Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Eziokwu efu
Otu mgbe ọ rụkọrọ ọrụ Sadio Mane na Charity: Ismaila Sarr bụ onye na-agba ụkwụ na-abụghị naanị na-enwu n'ọhịa kamakwa ụfọdụ na obodo Senegalese. Na foto dị n'okpuru, a hụrụ ya ka ọ na-arụ ọrụ Sadio Mane n’ihe banyere ọrụ ebere, ka ha na-enyere ndị ụwa na-atụ n’ọnụ aka.
Ismaila Sarr kwụghachiri ndị ya ụgwọ.
Acezọ Ya na Ọchịkwa- ​​Ngọzi nye ndị egwuregwu FIFA: Na FIFA, ọ dịghị onye nwere mmasị ịkwado ndị egwuregwu ngwa ngwa. Iji onye ọkpụkpọ nke nwere Pace bụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-awakpo ma ọ bụ na-achụ onye na-alụ ọgụ. Sarr onye gbara afọ 21 n'oge ederede bụ ngọzi nye ndị egwuregwu FIFA mgbe ọ na-abịa n'ike n'ike na ikike.
Maka afọ ndụ ya, Ismaila Sarr's Pace and Dribble bụ ngọzi nye ndị FIFA Gamers.
Ị maara?… Naanị Sadio Mane mere ka ọ ghara ịba uru karịa Sarr's 27 na 2018 Africa Cup of Nations.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata Ismaila Sarr Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanweela: Machị 25, 2021
Bọchị gbanwee: Eprel 3, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 11, 2021